၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊ AnTuTu Benchmark အရ Androidsis
AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်ရသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ Android သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘဲ၊ AnTuTu။ ထို့အပြင် GeekBench နှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းအမှတ်အဖြစ်ယူထားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောစံနမူနာအဖြစ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပေါ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှအစွမ်းထက်၊ မြန်ဆန်။ အကျိုးရှိရှိသိရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘဲ။
ထုံးစံအတိုင်း AnTuTu သည်များသောအားဖြင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှိအင်အားအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများ၏စာရင်းကိုတစ်လပြီးတစ်နှစ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဒီအချိန်, ကျနော်တို့နှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲများရှိသည် နိုဝင်ဘာအဆင့်အတိတ်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဤစာရင်းကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် AnTuTu သည်ယခုလဖေဖော်ဝါရီလတွင်တွေ့ရမည့်လာမည့်လ၏အဆင့်တွင်ဤအချက်ကိုလှည့်စားနိုင်သည်။ ထိုအခါဤဖြစ်ကြသည် မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သောနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၏အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းများAnTuTu Benchmark အရ
AnTuTu ၏အဆိုအရ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု
ဖုန်းအသစ်ကိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ ဂိမ်းကစားခြင်း Nubia ၏ အနီရောင်အင်္ဂါဂြိုဟ်, အတွင်း၌ RAM မှတ်ဥာဏ် ၁၀ GB ရှိပြီး power sponsor အဖြစ် Qualcomm Snapdragon 10 ပရိုဆက်ဆာသည်ဤအခွင့်အလမ်းသစ်တွင်ဤစာရင်းကို ဦး ဆောင်နေပြီးတန်ဖိုးအား ၃၂၀,၄၆၄ တန်ဖိုးဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 20 309,130 ​​ရမှတ်နှင့်အတူဒုတိယနေရာတွင်ကဲ့သို့ကထားခဲ့ပါ။
တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ ပဉ္စမနှင့်ဆဌမနေရာများတွင်တယ်လီဖုန်းများရှိသည် V20 ဂုဏ်ပြုပါ, Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 20X, 20 Pro ကိုမိတ် y ဂုဏ်ပြုမှော် 2သက်ဆိုင်ရာရမှတ်များ 305.525, 304.096, 302.872 နှင့် 300.978 နှင့်အတူ။ ပြီးခဲ့သည့်လေးရာထူးအတွက်ဖြစ်ကြသည် Xiaomi က Black ကငါးမန်း Helo300.211 အချက်များနှင့်အတူ, က OnePlus 6296.278 အချက်များနှင့်အတူ, က Xiaomi က Black ကငါးမန်း294.193 တစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ; ပြီးနောက် ZTE အားဖြင့် Nubia X ကို294.032 တစ်ရမှတ်နှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု